ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၃. ၅. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw
(ခ)-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၁၆) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည်‌့ ဥပဒေအရ တာဝန်ပေးအပ်ထားသည်‌့ နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်သူ သို့မဟုတ် အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
(ဂ)-ဒလမြို့နယ်တွင် စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်း သည့်မေးခွန်း
(ဃ)-တံတားဦးမြို့နယ်၊ မြေငူအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ စာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-ရေဦးမြို့ အ.ထ.က(၁)ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းဆောင်အမိုးများ၊ ကြမ်းခင်းများ၊ လှေကားများ၊ အကာလက်ရန်းများ ခိုင်ခံ့မှုကိုစစ်ဆေးကာ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ နောင်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟွေဟိုးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းနှင့် နားတစ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်ဟူးကျေးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းတို့တွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် အသစ်တစ်ဆောင်စီ ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်များမှာ ဘွဲ့ကြိုတန်း (ညနေသင်တန်း)များအား တာဝန်ယူဖွင့်လှစ်နိုင်သည့် တက္ကသိုလ်များရှိပါက ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်